Cuntada iyo Cuntada - Vondt.net
- Sida Loo Cuno Sambabada Caafimaadka Leh!
10 / 08 / 2016 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, tayada Articles/av waxyeelladayda
Daraasad lagu daabacay joornaalka cilmi baarista ee The American Thoracic Society ayaa muujisay in cunida saxda ah ay sidoo kale wanaajin karto shaqada sanbabada iyo sambabada caafimaadka. Baarayaasha waxaay ogaadeen in cunista xaydha badan ay si toos ah ula xiriirto halista yareynta cudurada sambabka.
Cudurrada sanbabada ayaa dhibaato weyn ku ah dalka Norway iyo adduunka oo dhan. Xaqiiqdii, COPD waa sababaha saddexaad ee sababa dhimashada adduunka - marka haddii aad yareyn karto fursadda cudurka sambabka adiga oo cunaya faybar badan, oo ay ku jiraan miraha iyo khudaarta, markaa waa inaad ku dadaashaa sida ugu wanaagsan ee aad naftaada u dhiirrigelisaa ugana daba tagtaa.
Qaadashada fiberku wuxuu ku xiran yahay caafimaadka sanbabada
1921 rag iyo dumar ayaa kaqeybqaatay daraasada - badanaa da'da 40-70. Daraasadu waxay tixgelisay qodobo isbedelaya sida xaalada dhaqan dhaqaale, sigaar cabista, culeyska iyo xaalada caafimaad kahor inta aysan bilaabin daraasada. Xog uruurinta kadib, waxay ukala qaybiyeen kaqeybgalayaasha sida kuxusan feybaarka kooxaha sare iyo kuwa hoose. Kooxda sare waxay cuneen celcelis ahaan 17.5 garaam oo fiber ah maalintii marka la barbardhigo kooxda hoose ee cuntay kaliya 10.75 garaam. Xitaa ka dib markii natiijooyinka la isku hagaajiyay iyadoo loo eegayo sababaha isbeddelaya, waxaa la sheegi karaa in kooxda ay ku jirto maadada fiber-ka ay sidoo kale ka caafimaad qabaan sanbabada Ma leedahay talo bixin Adeegso aagga faallooyinka ee hoos ku yaal ama annaga Facebook Page.
Natiijooyinka ayaa si cad oo cad u ahaa
Kooxda ugu sareysa ee leh fiber-ka oo qaadanaya 17.5 garaam maalintii, waxaa la ogaaday in 68.3% ay si caadi ah ushaqeynayaan sambabaha. Kooxda hoose ee qaadashada fiberka yar, waxaa la arkay in 50.1% ay caadi u leeyihiin sambabaha - farqi cad ayaa halkaas ka jira. Dhacdooyinka xaddidaadda sanbabada ayaa sidoo kale si aad ah uga sarreeyay kooxda oo ay ku jirto maaddo yar oo fiber ah - 29.8% iyo 14.8% kooxda kale. Si kale haddii loo dhigo: Isku day inaad cuntid noocyo kala duwan oo cunto ah oo ka kooban inta badan khudradda, miraha iyo walxo kale oo ay ku jirto maadada fiberku ku badan yahay.
Sidee fiberku u soo saari karaa sambabaha kuwa caafimaadka qaba?
Daraasadu ma dhihi karto 100% si hubaal ah sababta dhabta ah ee faybku u bixiyay caafimaadka sanbabada oo wanaagsan, laakiin waxay rumeysan yihiin inuu xiriir la leeyahay waxyaalaha fiber-ka ee anti-bararka. Waxay sidoo kale rumeysan yihiin xaqiiqda ah in fiberku uu gacan ka geysto koritaanka dhirta mindhicirka - tani waxay sidoo kale xaqiijin doontaa guud ahaan ka-hortagga jawaab-celinta cudurrada. Bararku waa asalka cudurada sambabaha badankood, hoos udhaca guud ee jawaab-celinta bararka waxay yeelan kartaa saameyn toos ah oo toos ah caafimaadka sanbabada. Faytarka badan ee ku jira cuntada ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa hoos u dhaca CRP (C-reactive protein) waxyaabaha ku jira - kaas oo ah darawal u ah caabuq sii kordha.
Marka la soo koobo, 'Cun miro iyo khudaar badan!' gabagabada maqaalkan. Baarayaasha ayaa sidoo kale aaminsan inay tahay inaan iska indhatirno daawada iyo daawada oo ah daaweynta kaliya ee ugu weyn ee loola jeedo cudurada sambabaha oo aan diirada saarno aqoonta cuntada iyo kahortaga. Cunto caafimaad leh waa in dabcan sidoo kale lagu daraa jimicsi iyo jimicsi kordhaya nolol maalmeedka. Haddii aad rabto inaad akhriso daraasadda oo dhan, waxaad ka heli doontaa xiriiriye xagga hoose ee maqaalka.
Xiriirka ka dhexeeya qaadashada fiberka cuntada iyo shaqada sambabka ee NHANES, Corrine Hanson et al., Buugaagta 'American Thoracic Society', doi: 10.1513 / AnnalsATS.201509-609OC, oo lagu daabacay khadka tooska ah Janaayo 19, 2016, aan la taaban karin.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23- Sida Loo Cuno Sambabada Caafimaadka Leh!
Cherry Lowers Fursadda Goorta
02 / 08 / 2016 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, tayada Articles/av waxyeelladayda
Daraasad lagu daabacay joornaalka cilmi-baarista ee Arthritis & Rheumatism ayaa muujisay in cunista jeeriga ay saameyn caafimaad ku yeelan karto, iyo waxyaabo kale, turqo. Cunista jeeriga 2 maalmood oo kali ah!
turqo waa nooc ka mid ah noocyada ugu caansan ee arthritis-ka - qaabkan gout waxaa sababa uric acid badan oo jirka ku jira. Dhacdada kordhay ee uric acid ee jirka waxay u horseedi kartaa kiristaalo uric acid ur ku leh kala goysyada, badiyaa suulka weyn. Abuurka aashito loo yaqaan 'aashitada loo yaqaan' loo yaqaan 'acid acid' (oo loo yaqaanno Tophi) oo umuuqata buro yar oo maqaarka hoostiisa ah.
Daraasad muhiim ah oo muujineysa saameynta supplements dabiiciga ah
Kaabisyo badan oo dabiici ah ayaa wax badan ka qaban kara kiniinnada cad-cad ee wareegsan iyo daawooyinka - oo aan lahayn waxyeellooyin. Daraasadani waxay muujisay in jeeriga, ay ugu wacan tahay maadooyinkooda sare ee antioxidants-ka iyo saamaynta dabiiciga ee anti-bararka, ay door ku leeyihiin daaweynta iyo ka hortagga foomamka gout - oo ay ku jiraan turqo.
Daraasada ayaa raacday kaqeybgalayaasha wax kabadan 1 sano
Daraasadu waxay qiimeysay 633 kaqeybgalayaal sanad dhan. Waxaa lagula socday dhibco sida astaamaha, dhacdooyinka, sababaha halista, daawooyinka iyo dabiici ahaan kufilan, qaadashada jeeriga - labadaba nooca qaadashada (dabiiciga laga soocayo) iyo inta jeer. Cilmi baarayaashu waxay go'aansadeen in hal jeer oo jeeriga ah uu ahaa koob badhkiis - ama 10-12 jeeris ah.
Qaadashada cherry = fursadda yare ee goynta
Markii ay raaceen kooxda ka dib 1 sano, tirakoobyadu waxay muujiyeen in kuwa cunay jeeriga - ugu yar 2 jeer hal sano gudahood - ay haysteen 35% fursad hoose oo soo noqnoqosho iyo kacsanaan gout ah. Waxaa si dabiici ah loo arkay in qaadashada jeeriga badan - waqti kadib - sidoo kale lala xiriiriyay hoos u dhaca gout. Markii aad isku dardartay qaadashada jeeriga iyo allopurinol (daawo yareyneysa waxa ku jira uric acid) waxaad aragtay hoos u dhac gaaraya 75% weerarada gout.
Cunnadu waxay muhiim u tahay kuwa ka cabanaya gout. Dadka qaba ogaanshaha cudurka arthritis-ka waa inay diirada saaraan cunista cunnooyinka ka hortagga bararka iyo cunno ay ku badan tahay antioxidants. Waxaan sugeynaa tijaabooyin waaweyn oo kala soocid ah si aan u hubino waxa jeeriga u qaban karo kuwa qaba gout - laakiin waa inaan dhahnaa waxay umuuqataa mid rajo badan!
Sidoo kale aqri: - 6 Jimicsi ka dhan ah Sciatica
Zhang iyo al, Isticmaalka Cherry iyo Khatarta Weerarada Gout-ka ee soo noqnoqda
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58Cherry Lowers Fursadda Goorta
Bogga 1 ee 16123>»